Ungayikhetha njani i-hardware yomnyango? jonga apha
Abantu abaninzi banokungabaza xa bethenga kwaye befaka izixhobo zomnyango. Ndingayikhetha njani ukulingana ubungakanani ngokugqibeleleyo? Apha, thatha i-alloyum alloy swing door system eyenziwe ngu-Shandong Yuqiang njengomzekelo. Nceda uphendule la mathandabuzo. Imigaqo yoqwalaselo lweMveliso ...
Inkqubo yesicelo senkqubo yokuvula umbane
Iimpawu zetyathanga lokuvula iwindow: 1. I-D-QDL yokuvula iwindows kukuvula iifestile, ekulula ukuyifaka; Umphezulu wemveliso wamkela inkqubo yokutshiza i-fluorocarbon, kwaye inqanaba lokhuseleko lonyuswe laya kwi-IP32, ekhusela ngokufanelekileyo imeko-bume yokusebenza ...
Qinglianyuan Integrity Education Centre of Jinan Commission for Uqeqesho Inspection-Yale Electric Ukuvula System Project intshayelelo
I-Jinan Qinglianyuan Integrity Education Centre inxulumene neKhomishini kaMasipala waseJinan yokuHlolwa koLuleko yeQela lamaKomanisi lase China. Itholakala kumntla wecandelo lempuma yezoKhenketho kuMantla eNdlela, kwiSithili saseLicheng, kwisiXeko saseJinan, kwicala lasentshona leLianhuashan Heat S ...
Ndingenza ntoni xa iqhaga lomnyango liphuliwe?
Kubomi bethu bemihla ngemihla, ndiyakholelwa ukuba abantu abaninzi baye bahlangana ukuba ulwimi lwe-oblique lubambekile okanye isiphatho sesitshixo seminyango asinakujikwa. Ukuba uhlangabezana nolu hlobo lwengxaki ngesiquphe, kufuneka sazi esona sizathu sokuba kutheni ingavulwa, emva koko umisele iyeza elifanelekileyo ...
Ukufakwa kwitekhnoloji yokhuseleko lweengcango zealuminium kunye neefestile Ukulungiselela ukwakha
Amalungiselelo obuchwephesha Ubume kunye nobukhulu beminyango kunye nokuvulwa kweefestile kuyahambelana nemizobo yokwakha, kwaye ingcaciso yezobuchwephesha kufuneka yenziwe ngokweemfuno zokwakha. Ukulungiswa kwempahla Inkcazo kunye nemodeli yeengcango zealuminium kunye neefestile ...
Ngawaphi amanqaku ekufuneka uthathele ingqalelo kuwo xa ukhetha iingcango zeprofayili zealuminium kunye neefestile?
Xa kuziwa kwiingcango zealuminium kunye neefestile, abahlobo abaninzi bayabathanda kwaye babathiye. Into abayithandayo isitayile silungile kwaye ayinasiphene, kwaye into abayithiyileyo kukungabinanto kweefestile. Ngokukodwa ngexesha lemvula, kukho imvula enkulu ngaphandle kunye nemvula encinci ekhaya, umoya onamandla ngaphandle ...
Ungabukhetha njani ubungakanani kunye nesitayile seehenjisi seminyango kunye neefestile?
Wonke umntu uyawuqonda umsebenzi weehenjisi. Njengenye yezinto zehardware, iingcango kunye neefestile azinakwahlulwa kwiihenjisi kusetyenziso oluqhelekileyo. Iihenjisi ezincinci akufuneki zijongelwe phantsi. Iingcango kunye neefestile ezichaziweyo ezahlukeneyo ekhaya, awunakuthenga ubungakanani behenjisi enye. Kuya kufuneka ch ...
Izibonelelo zokusebenzisa iifestile eziguqulweyo
1. Lungiselela ukusebenza komoya xa ifestile iphantsi, igumbi alinakuphefumlwa ngokwendalo kuphela, kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba umoya ungena kwigumbi usuka efestileni nasecaleni, kwaye awuzukuvuthuza ngqo emzimbeni. Ngokukodwa xa umahluko wobushushu phakathi kwangaphakathi kunye ...
I-Yuqiang Hardware-2019 iZhengzhou yoShishino loLwazi loLwazi ngezoLwakhiwo iphele ngempumelelo
Ukususela ngo-Agasti 28 ukuya ku-30, 2019, i-2019 Zhengzhou Commercial Information Expo Expo ibibanjelwe e-Zhengzhou International Convention and Exhibition Centre. Lo mboniso uhlanganisa iimveliso ezaziwayo zeendidi ezahlukeneyo kushishino lokuhombisa kulwakhiwo ...
I-14 ye-China Weifang Door, Window kunye Curtain Wall Expo yabanjwa ngempumelelo ngo-2019
I-2019 China Weifang Door, Window kunye nekhethini Wall Expo izakubanjelwa e-Weifang Lutai Convention nakwiziko leMiboniso ngoMeyi 16-18, 2019! Kulo nyaka, lo mboniso ubanjwe ngempumelelo kwiseshoni ye-14, ebibanjwe ngokukodwa yi-China Building System Doors kunye ne-Windows Alliance, iQuanlian Rea ...
Yuqiang kutyhilwa 22 Plastic Door kunye Window Exhibition
Nge-14 ka-Epreli 2017, i-22nd yeSango lePlastiki leSizwe kunye neNkomfa yoNyaka yoShishino lweWindows kunye neMinyango yePlastiki, iiWindows kunye neMiboniso yeeMveliso ezinxulumene noko zavulwa kakhulu kwiNdibano yeHlabathi yeXi'an Qujiang kunye neZiko leMiboniso. Umboniso wawubanjwe yiC ...
Yuqiang Amatyala Fujian Aluminium yabucala steel StainlessDoor kunye Window Industry Exhibition
Ngomhla kaJanuwari 17-19, uxhaswe nguFujian Gumei Metal Co, Ltd., "iProfayili ye-2016 yeFujian Aluminium / Insimbi engenanto / umnyango kunye neMiboniso yeeMveliso zeWindows" ehlelwe yi-Qingdao Yuqiang Hardware CO., LTD yagqitywa ngempumelelo eNan'an Impumelelo IZiko leMiboniso yeHlabathi. ...